Zimbabwe Archives - ARYNEWS
HARARE: Both leading contestants in Zimbabwe’s disputed presidential election signalled they had won on Thursday as a nervous nation awaited the official results three days after voting. International observers urged the electoral…
HARARE: Zimbabwe's opposition MDC party on Tuesday claimed victory in the country's historic elections while the government threatened to jail leaders announcing results as the wait for official tallies dragged on. Electoral officials…
Fakhar Zaman broke the record for the most number of runs for Pakistan in a bilateral one-day international series when he scored 85 against Zimbabwe in the fifth ODI in Bulawayo. Zaman finished on 515 runs from five matches at an…
BULAWAYO: Two days after becoming the first player from Pakistan to score a double century in a one-day international, Fakhar Zaman reached a further milestone in becoming the quickest player in history to reach 1,000 runs in the format as…
BULAWAYO: Fakhar Zaman became the first Pakistan player to hit a double century in one-day internationals as Pakistan crushed Zimbabwe by 244 runs to go 4-0 up in their one-day series. Zaman smashed 210 not-out from 156 deliveries, moving…
Pakistan beat Zimbabwe in 3rd ODI, seal the series
BULAWAYO: Pakistan won third international against Zimbabwe in a dominating display of bowling and batting and sealed the five matches ODI series 3-0. Earlier Zimbabwe crumbled to 67 all out in the match played at Bulawayo stadium.…
AFP Jul 16, 2018
BULAWAYO: Pakistan continued their dominance with both bat and ball to win the second of five one-day internationals against Zimbabwe by nine wickets. Opener Fakhar Zaman eased to his second ODI century, finishing with a career best 117…
BULAWAYO, ZIMBABWE: Pakistan stormed to a 201-run win over Zimbabwe in Bulawayo on Friday in the opening game of their five-match one-day series. Career-best efforts from opening batsman Imam-ul-Haq and leg spinner Shadab Khan ensured…